China Wholesale Mutengo weHXGN-12 AC Yakakwira Voltage switchgear Yakagadziriswa Metal Yakavharwa Loop switchgear-shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Wholesale Mutengo weHXGN-12 AC Yakakwira Voltage switchgear Yakagadziriswa Metal Yakavharwa Loop switchgear-shengte
H XG N-12 AC yakakwira-voltage yakamisikidzwa simbi yakavharwa chiuno switchgear iri matatu-chikamu AC yakatarwa voltage 12KV, frequency 50H Z indoor yakakwira-voltage loop loop magetsi uye inouraya magetsi magetsi.
Kuchinja michina. Inoshanda kumabhizimusi emabhizimusi uye emigodhi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvepamusoro-soro, mapaki echikoro uye dzimwe nzvimbo dzekuparadzira sisitimu yekugamuchira nekugovera simba.
Khabhoni mafupa akasunganidzwa ne20mm modulus maburi, uye switch iri padivi-yakaiswa bhokisi-mhando yakamisikidzwa kabhineti.
Chikamu chepamusoro chemuviri wedhabhini ibhasi, kamuri yechiridzwa iri pamberi pekamuri rebhazi, rakaparadzaniswa nendiro yesimbi, iyo yepakati chikamu chemuviri wedare ikamuri yekuchinja, uye yakaparadzaniswa neyekudzivirira bhodhi uye nzvimbo yebhazi .
Iyo yepamusoro chivharo cheplate chekabineti yemuviri chinopihwa nemhepo mafafitera, uye iyo yekumashure ndiro ndiro neparutivi ndiro inopihwa ne louver maburi emhepo.
Iyo kabineti uye masuo epaneru anosaswa ne epoxy polyester yeupfu pendi, inorapwa pakakwirira tembiricha, ine yakanaka nzvimbo uye yakasimba ngura kuramba.
Kuisa danda mukabati, kupatsanura kwepakati uye ndiro yepasi inorapwa nekumisa galvanizing.
Pazasi pekabhini, shongwe-yerabha mhete yakaiswa pazasi yekudzivirira bhodhi, iyo inokodzera tambo dzakasiyana saizi.
Load switch, grounding switch uye kabati musuwo zvine yakavimbika michina kupindirana, iyo yakaona mashandiro e "mashanu ekudzivirira".
Musuwo wedare remakurukota unovhara uye unotenderera mukova. Panguva ino, switch huru inovhara uye yakavharwa. Iro banga rekuvhura rinovhurwa uye banga rekusimudza rinogona kuvhurwa.
Chinja chikuru chinogona kuvhurwa chete mushure mekunge banga rekumisikidza ravhurwa uye kuvharirwa kweiyi switch huru kwaburitswa.
Mushure mekuvhara kukuru, banga rekuvhara rinovhara nekuvhara, musuwo wedare remakurukota wakakiiwa, uye bhatani remukova harigoni kuzununguswa.
Chero bedzi switch huru yakadzimwa, mucheki wepasi anogona kuvhura uye kuchengetedzeka kunovharwa.
Chete kana banga rekuvharisa ravhara ndipo panogona kuvhurwa gonhi remusuwo uye musuwo wedare remakurukota unovhurwa.
Iyo yekumisikidza banga inofanira kuvharwa kana fiyuzi ichida kutsiviwa mushure meiyo fiyuzi pini inoshandiswa.
Kana pasina banga rekumisikidza, kuvhura nekuvhara mashandiro ekuchengetedzeka kwekutambudzika kuchiri kuitwa zvinoenderana nemaitiro ekuvhiya nebanga rekumisikidza, uye kuteedzana kunoenderana kunoshandawo.
Iyo yakanyatso gadzirwa yemukati dhizaini yekuchinja switch inoita iyo yekudyidzana yakavimbika.
Kune kabhodhi kabha, zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, kana tambo yaiswa magetsi, iro remagetsi remagetsi rinogona kushandiswa kudzora musuwo wedare remakurukota, kana padiki inogona kushandiswa kudzora kuvhurwa kwemusuwo wedare remakurukota.
Kana bhaudhi ichibviswa uye ichivhurirwa musuwo wekabhini, pane plexiglass chipingamupinyi uye chiratidzo chinorambidza pairi.
Mucheto wezasi wekhabineti wakabatana neakasarudzika mutsara wekusimbisa kuti uve nechokwadi chekuchengetedza uye kwakachengeteka kudzivirirwa.
Shanduko dzakabatana nehupenyu kuratidza insulators uye vanosungwa nemhangura mabhagi.
Ese makonati emakamuri akashongedzerwa nehupenyu kuratidza. Kuvhura mapanhi emikova anogona kungoitwa chete kana pasina magetsi ekuratidzira akasimbiswa.
Rambi re incandescent rakaiswa pane yemukati jira remusuwo wekabhineti wekuvhenekesa uye hunyoro-chiratidzo chebasa mukabhoni.
Rated ikozvino 630A Zvichienderana nepakati
Fiyuzi kunonyanyisa yavose sezvavakatarirwa ano - 100A
Yakarongerwa kwenguva pfupi kushivirira (kupisa kwakasimba) ikozvino (RMS) Load chinja 20A / 4s -
Earthing switch 20kA / 4s
Main wedunhu kuramba 20120μΩ
Rated Anoshanda mutoro kutyora ikozvino 630A
Rated yakavharwa-loop switch-off yazvino 630A
Yakarongwa Cable Kubhadharisa Razvino 10A
Rated pfupi redunhu kuvhara ikozvino 50kA -
Rated chinja yazvino - 1000A
Rated pfupi redunhu kutyora azvino - 31.5kA
Simba Frequency Pfupi-yenguva Kushivirira Voltage (1min) Zvichienderana uye munguva 42kV
Isolated kuputsika 48kV
Mheni kuvhunduka kumira voltage Zvichienderana uye munguva 75kV
Isolated kuputsika 85kV
Mechanical hupenyu 2000 mapoka
Chikamu chekudzivirira IP3X
Zviyero zvekunze (switchgear mukati nekunze kabhineti) yakafara x yakadzika x yakakwira 400x900x2000 （1700）
Pashure: Wepamusoro Hunhu XGN15-12 Bhokisi Rudzi Rakagadziriswa AC Simbi Yakavharwa Sarufa Hexafluoride Loop switchgear Fekitori
Zvadaro: Yakasarudzika GCK (L) Yakadzika Voltage Dhirowa switchgear Fekitori Mutengo-shengte
Best KYN28A-12 Indoor Metal Armored kudhonza-panze S ...